-Umjaho wokugijima webanga elide we-11 Umjaho we-11 kamkoman zhenji ukudla., Umjaho wokugijima amabanga amade wabanjwa ngoJuni 15, 2019.Kulo mjaho obude obude, kubandakanya nomphathi ojwayelekile, kukhona Abahlanganyeli abangama-394 bebonke. Bahlukaniswe ngamaqembu amane ngokuya nge-ag ...
—— Umncintiswano wokukhulisa izintambo wabasebenzi we-6 Umncintiswano wezintaba wabasebenzi wonyaka kaMongameli wekkoman zhenji ukudla co., Ltd. wabanjwa ngoMeyi 11,2019 entabeni ye-fenglong njengoba kuhlelwe. Cishe bangu-400 abasebenzi kanye namalungu omndeni wabo abamba iqhaza kulo mncintiswano waminyaka yonke. Icishiwe ...
Lwa nalolu bhubhane, bonisa uthando, vikela izindlela zokuziphilisa zabantu - - zhenji iyasebenza
Muva nje, ngaphansi kobuholi beqembu kanye nombuso, wonke umphakathi ubambe iqhaza empini entsha ye-coronavirus.Lokhu kuqubuka kwesibalo kusithinte izinhliziyo zawo wonke umuntu. Ukusuka kuhulumeni omkhulu kuya kuhulumeni wasekhaya, sisebenzisana kakhulu ukuthola imali futhi sithathe izinyathelo ezisebenzayo.